စမတ်စီးတီးစမတ်ဆိုင်းဘုတ်များ | RayHaber | raillynews
[10 / 02 / 2020] ၁၄ သန်းခရီးသည်တင်လေကြောင်းလိုင်းကိုဇန်နဝါရီလတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်	06 တူရကီ
[10 / 02 / 2020] IETT သည်နှစ်ပတ်လည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့် Nostalgic Tram အတူတကွကျင်းပသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 02 / 2020] သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်Paşabahçe Ferry မှHaliçသို့သမိုင်းဝင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 02 / 2020] အစ္စတန်ဘူလ်ကျွန်းကူးတို့နှင့် Hike သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 02 / 2020] Marmaray သည် Istanbulkart Transfer System တွင်ပါဝင်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 Kayseriစမတ်စီးတီးမတ်လက္ခဏာများ
01 / 03 / 2019 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က ကတီထွင်ပြီး "စမတ်လက္ခဏာများ" မြို့တော်ရဲ့ 11 အချက်ထဲတွင်နေရာခဲ့ကွောငျးန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ယာဉ်ရပ်နားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်။
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က ကတီထွင်ပြီး "စမတ်လက္ခဏာများ" မြို့တော်ရဲ့ 11 အချက်ထဲတွင်နေရာခဲ့ကွောငျးန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ယာဉ်ရပ်နားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်။ ယာဉ်မောင်း၏အသိဉာဏ်လမ်းကြောင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်အဆိုပါထေိုနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ယာဉ်ရပ်နားထေိုသတင်းအချက်အလက်များလွယ်ကူစွာရှိသည်ဖို့သွားဖေါ်ပြခြင်းရပ်နားဆိုင်းဘုတ်များ storey ။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဆိုပါစမတ်လက္ခဏာတွေစမတ်မြို့ပြစီမံကိန်းအားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မြို့ပြအသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အပလီကေးရှင်းများနယ်ပယ်ထဲမှာအိမျ R & D အများအပြားစီမံကိန်းများကို Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့်သယ်ဆောင်ကြောင်းဖော်ပြ ယင်းပို့ဆောင်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်နိုင်ငံသားများရပ်ရန်လွယ်ကူအထွေထွေမန်နေဂျာ Feyzullah Gundogdu, သူတို့လျင်မြန်စွာရောက်ရှိဖို့ရည်ရွယ်ဟုဆိုသည်။
ထို့ကြောင့်တလက်လမ်းဘေးအပေါ်တရားမဝင်တောက်ပတားဆီးမည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ပါဝင် "ပိုမိုလွယ်ကူ parking နှင့်ကျယ်ပြန့်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် Gundogdu ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြို့သူမြို့သားအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်နေရာပြောနေကြပါတယ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုရဲ့ R & D ဦးစီးဌာန Variable ကို Message စနစ် (DMS) အသုံးပြုသောသေချာစေရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေထေိုနှုန်းထားများနှင့်အတူထပ်ကားပါကင်အချက်အလက်များ၏အနီးဆုံးဗလာယာဉ်ရပ်နားအများကြီးကိုကမ်းလှမ်းခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က စမတ်ဆိုင်းဘုတ်များအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကလမ်းများနှင့်လမ်းဆုံ၏တံခါးဝအဖြစ်ပြင်ပတွင်ကားပါကင်မှာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
စတင်နေပြီအဆိုပါ disassembly အပေါ် Didim လမ်းကြောင်းများလက္ခဏာများ
အဆိုပါ 90 ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအမြန်နှုန်းလျှောက်လွှာများအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဖယ်ရှားခဲ့သည်ကိုခှဲဝေ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro လက္ခဏာတွေသစ်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ smart ခရီးသည်ရထားလမ်းလာ
variable ကို Message စနစ်
Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc က
အဘယ်ကြောင့်ဦးစားပေးမှု Bursa အတွက်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan လေ့လာမှုများဆက်လက်
Manisa Metropolitan အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များပိုးသတ်
သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်Paşabahçe Ferry မှHaliçသို့သမိုင်းဝင်ခဲ့သည်
အစ္စတန်ဘူလ်ကျွန်းကူးတို့နှင့် Hike သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
Marmaray သည် Istanbulkart Transfer System တွင်ပါဝင်သည်
Karabağlar Metro ကို ၂၀၂၀ အကုန်တွင်ပြီးစီးမည်
Tofaşသည်ယူရိုသန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်။